Case Study of Myanmar Political History – Min Thayt
Case Study of Myanmar Political History
Tag: Case Study of Myanmar Political History
လက်မှုပညာသည်တစ်ယောက်က အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး သူ့ကိရိယာ တန်ဆာပလာတွေကို ထက်ရှအောင် လုပ်ရမယ်… လို့ ကွန်ဖြူးရှပ်က ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ သီးသီးသန့်သန့်ကာလတစ်ခုယူပြီး လက်နက်ကိရိယာတွေကို ထက်ရှအောင် သွေးယူချိန်၊ မရခဲ့ပါဘူး။ အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့ အာဏာဖီဆန်ရင်း၊ အခြေအနေက လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဆီ တွန်းပို့ခံရလို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို လျှောက်တဲ့အခါမှာ လည်း၊ ရေကန်အသင့် ကြာအတင့် ပြင်ဆင်ထားတာမျိုး မရှိ။...
၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်စမှာပဲ ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာဆန်းစစ်ချက် (၁၉၄၈ - ၁၉၈၈) စာအုပ် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ထုတ်ကတည်းက တခုတ်တရ စူးစူးစိုက်စိုက် ဖတ်ရတဲ့စာအုပ်။ နောက်ပိုင်းကာလများမှာလည်း ခေတ်သစ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းအကျဉ်းကို လျှပ်တပြက် လှန် လှောချင်ရင် ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာဆန်းစစ်ချက် စာအုပ်ပဲ ပြေးပြေး ကောက်ကိုင်ရတယ်။ အသေးစိတ် ထပ်လိုက်ချင်ရင်တော့၊ ဆိုင်ရာ...
ဦးအောင်ခင် ၊ လွတ်လပ်ချင်တဲ့စိတ် နှင့် လေလှိုင်းထဲက စာအုပ်စင်လွင်ဦး စာပေ၊ ပထမအကြိမ်။၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ။မြန်မာ့အရေးလေ့လာသုံးသပ်ချက်သုတေသနစာတမ်းနှင့်စာအုပ်များအား ပြန်လည်တင်ပြချက်။ ဒေါက်တာအောင်ခင် အာဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၊ မြန်မာပြည် စာဖတ်ပရိသတ်က စိမ်းနေမယ်လို့ မထင်ပါ။ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ သမိုင်းဌာနက သမိုင်းကျောင်းဆရာဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်မှာ၊ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မနှစ်မြို့လို့၊ မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အောင်ခင်ဦး...
Literature Politics Sketchiography
ကျော်ဝင်းဟာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ဇောင်းပေးပြောခဲ့ပါသလဲ။ ကျော်ဝင်းဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးနည်းနာဖြစ်စဉ်၊ ဖြစ်အင်တွေကို ဇောင်းပေးပြောခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လစ်ဘရယ်စိတ်အခံ ထုထည် ကြီးမားလာအောင် သူ့ကလောင်နဲ့ ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဓလေ့အရ အစွန်းရောက်ဓလေ့ဟာ လစ်ဘရယ်စိတ်အခံနဲ့ ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကို တတ်နိုင်သရွေ့ ပြန်ဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရယ်ဒီကယ်ချောက်ကမ်းပါးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကျော်ဝင်းဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတွေမှာ ထပ်လဲလဲ ရေးသားသတိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။...
Min Thayt November 7, 2021 November 7, 2021
• တကယ်တော့ နည်းသစ်လို့တောင် ပြောလို့ မရပါ။ နည်းဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေ သိပ် ဂရုမမူ သတိမထား အပြော မများကြပါ။ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကို ပဋိညာဉ်တွေ၊ စာချုပ်တွေ၊ ကတိကဝတ်တွေ၊ သဘောတူညီမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးနည်းအားဖြင့် လုပ်ကြတာကလည်း တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းကတော့ နိုင်ငံရေးအရ မစွမ်းနိုင်မယ့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကို ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာအရ စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမာနည်းအားဖြင့်...
Articles Literature Politics
▄ အမျိုးသားရေးဝါဒနောက်ကွယ်က အမျိုးသားရေးစာပေများ
မြန်မာပြည်မှာ၊ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ ပူးတွဲပါလာတဲ့ ဝါဒ နှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ လက်ဝဲ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာ ဗမာ့အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒတို့ဟာ အပြိုင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ မျိုးချစ်ဝါဒ၊ ဝံသာနုစိတ် (တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်) ဆိုတာတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ တမင်မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးရတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဝံသာနုစိတ်တွေကို နိုးကြား လာအောင် စာပေတွေကသော်လည်းကောင်း၊...
▣ (မြန်မာ့လူမှုနိုင်ငံရေးဓလေ့) ဒီနေရာမှာ ဝေါဟာရ စကာလုံး လေးလုံးကို တွေ့နိုင်တယ်။ (၁) မြန်မာ၊ (၂) လူမှု၊ (၃) နိုင်ငံရေး နဲ့ (၄) ဓလေ့။ ဒီစကားလုံးလေးလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ လူမှုနိုင်ငံရေးဓလေ့ကို လေ့လာဖြစ်အောင် ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးရဲ့ ဗမာ့နိုင်ငံရေးတန်ဖိုး (Burmese Political Value) ကျမ်းက စပြီး လှုပ်နိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာ့နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးတွေကို...
▄ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် နိဂုံး
• မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအနေနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်အား နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးစနစ်ဖြင့် ဖော်ဆောင်ရာတွင် နှစ်ကြာသည်နှင့်အမျှ အောင်မြင်မှု မရှိတော့ပါ။ ပါတီဝင်အားလုံးနှင့် ပြည်သူများ နှစ်ရှည်လများ ခြိုးခြံချွေတာ၍ မနေနိုင်ကြတော့ပေ။ ဇွဲမကောင်းနိုင်ကြတော့ပေ။ မျှတစွာ စားသုံးရ သော အချိုးကျစနစ်၊ မလောက်၍ မဲနှိုက်ရသောစနစ်၊ မကြိုက်တာရော ကြိုက်တာရော တွဲယူရသော စနစ်၊ မိမိပိုင်မြေတွင် စီမံကိန်း သီးနှံအား ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် စိုက်ရသောစနစ်၊...